Jaaliyadda Reer Puntland ee Sudan Oo Qeyb ka ah Dabaaldaga 1-da August, – SBC
Jaaliyadda Reer Puntland ee Sudan Oo Qeyb ka ah Dabaaldaga 1-da August,
Posted by SBC Editor on Agoosto 3, 2015 Comments
Munaasabada waxaa kasoo qayb galay qunsulka Safaarada Soomaalida ee dalka Sudan iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan safaarada ‘Suldaan kamaal’Ardayda wax kabarata Sudan sidoo kale waxaa khadka taleefanka uga qayb galay wasiirka Howlaha guud iyo Gadiidka Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi.
Fanaanka Liiban Jig jiga ayaa isna joogay munaasabada waxaa uuna ka qaaday heeso wadaniya oo dhamaantood ka hadlayey Puntland iyo muhiimada ay u leedahay umad Soomaaliyeed ‘dhamaantoodna waxay soo jiiteen intii ka qayb gashay xaflada.
Boorar ay ku xardhanayeen Calanka Puntland Ayaana ku dhagana hoolka ay Munaasabadu ka socotay dhalinyaro wiilal iyo gabdho ah ayaa iyaguna ku labisna dhar kasamaysan Calanka Puntland kuwaas oo wadani nimo laga dareemayey.
Dhamaan dadkii goobta ka hadlay ayaa hadala dood u badnaayeen in Puntland ay tahay hooyada Soomaaliya mar walba ay raadiso dowladd awood leh oo dalka dhan hanata.
Gudoomiyaha Uruka isku xirka Ardayda Puntland ee Sudan Cabdirisaaq Maxamuud Faarah Qalinle ayaa sheegay in munaasabadan ay soo qaban qaabiyeen ardaydu ayna muhiim tahay xuska 1agoosto.
Qalinle ayaa tilmaamay in Ardayda reer Sudan ay caanku yihiin xuska 1agoosto isagoo xusay in ardayda waxka barata sudan ee reer Puntland ay yihiin kuwo isku xiran ayna ku weynta tahay Puntlandnimadu.
Qunsulka Safaarada Soomaaliya ee Dalka Sudan Ibraahim Guure ayaa dhamaan dadka reer Puntland ugu hambalyeeyey1agoosto waxaa uuna sheegay in Puntland 17kii sano ee ay jirtay ay Soomaaliya wax badan u qabatay ayna tahay mida dhalisay in laga baxo kumeel gaarnimada.
Suldaan Kamaal oo isna hadal ka jeediyey munaasabada ayaa sheegay in Puntland mudadii ay jirtay hormaro badan ku talaabsatay waxaa uuna dowladda Fadaraalka u sheegay in aysan marin habaabin dadka isku tashtay.